Halyeey kooxda Liverpool ah oo sheegay sababta ka dambeysa guulaha Klopp iyo Guardiola – Gool FM
(England) 31 Maajo 2019. Halyeeyga Liverpool ee John Barnes ayaa sheegay kahor kulanka finalka Champions League ay sabtida ku wada ciyaari doonaan kooxaha Reds iyo Tottenham Hotspur magaalada Madrid ee caasimada dalka Spain, in Reds ay haatan guraneyso miraha kalsoonidii ay horey u siisay macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp ayaa ku guuleystay inuu horumariyo qaab ciyaareedka kooxda Liverpool, tan iyo markii uu yimid sanadkii 2015-tii, isagoo ku hogaamiyay in laba jeer xiriir ah ay gaaraan finalka tartanka Champions League.
Hadaba laacibkii hore xulka qaranka England ee John Barnes ayaa kahor kulanka finalka Champions League sheegay:
“Waxaa jira laba kooxood ee u ogolaaday maamulkooda iyo taageerayaashooda awood iyo kalsooni, waana Manchester City iyo Liverpool, taasina waa sababta ay uga sareeyaan kooxaha kale”.
“Miyay ka fiican yihiin kooxaha Chelsea iyo Manchester United?- taasi qasab ma ahan, laakiin waxaa jira isku dheelitirnaanta kooxaha Man City iyo Liverpool, taageerayaasha ayaana kalsooni ku qaba macalinka, sababtoo ah ma jiro macalin ka mid ah tababarayaasha ee raadiya marmarsiyo marka ay guuldareystaan”.
“Si kastaba ha noqotee waxaad ka fikireysaa Jose Mourinho, sidee ayaad u ceyrin kartaa macalin, sababtoo ah ciyaartoyda ma doonayaan inay ka hoos ciyaaraan maamulkiisa, waa suuragal in la ceyriyo Jürgen Klopp hadii aysan dooyneynin ciyaartoyda inay kasii hoos shaqeeyaan”.
“Guardiola wuxuu booska saddexaad kaga dhameystay dhanka kala sareynta horyaalka xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee City, lakiin fiiri waxa ay kooxda sameysay kaddib, sababtoo ah kooxda ayaa ku kalsoon tahay macalinka”.
“Labadan macalin ee Jürgen Klopp iyo Pep Guardiola ayaa ah tababarayaasha loogu kalsoon yahay, isla markaana ah kuwo madax banaan, wana sababta ay u guuleystaan”.
RASMI: Inter Milan oo magacawday tababaraha cusub ee kooxdeeda